Tena ilaina ve ny hoe mitovy ZO ny lahy sy ny vavy???
Satria @zao dia misy ny vhv no miasa fa ny lhl indray no mitaiza,iny mety tsy ho olana ihany fa ilay vhv lasa mibaikobaiko ilay lhl mijanona ao antrano no ôtrany hafa²ny mahita azy
Ny vhv lasa ôtrany tsy manam-pandeferana intsony ny betsaka any @ firenena mandroso ohatra dia ny vhv nobetsaka irery satria noho ilay vola fanampiana dia tsy te handefitra
ohatra1 , Araka ny voalazan'ny terrafemina 85 % ny reny frantsay no miaina irery na miaraka @ zanany na tsia
Ny fandeferana lasa otran'ny hoe noho ny vola no hanaovana azy @zao fa tsy noho ny fitiavana ny vady sy ny zanaka intsony,
izay manam-bola no hoatra ny tompon-teny farany ao anaty tokan-trano,ny ankabeazan'ny firenena mahantra indray dia ny tsy fananana fahaleovan-tena ara-bola no mampifikotra azy ao matetika.
Fa raha vao manam-bola ny vhv dia hoe mitovy ZO ny lahy sy ny VAVY
Tena ilaina ve ilay fitovizan-jo,tsy @ resaka ara-bola ihany fa @ lafiny rehetra,dia ahoana ilay tenin'ny Baiboly hoe ny lahy no lohan'ny vavy ?
izany hoe tsy mifanohitra ve ny hoe mitovy ZO ny lahy sy ny vavy,@ teny hoe lhl no lohan'ny tokan-trano?
Re: Tena ilaina ve ny hoe mitovy ZO ny lahy sy ny vavy???
Par: ah an an
Date: 30 janvier 2018 - 19:12
Non, tsy mety ny mitovy zo, mila omena zo mihotra noho ny an lhl ny vhv, izay no mahatonga ny vhv mbola mitaky isaky ny 8 mars
Par: ancien regime
Date: 01 février 2018 - 15:10
hatrany ampiangonana io
efa mivadika ny lahatra
Efa lasa vehivavy indray izao ny Levita, ny apotsoly, I J. ihany sisa no tsy sahy atao vehivavy
Izay ny vokatra ny fandrosoana e
Aza manaiky fotsiny rehefa tsy mety aminareo
Date: 01 février 2018 - 17:56
Ny fitovian-jo miaraka @ fitoviana ara-materialy. Raha mbola miankina ara-pivelomana @ lhl ny vhv dia mazava fa tsy afaka hitovy zo. Raha mbola ny herin-tsandry sy ny herim-batana no fototry ny fahombiazana dia mazava fa tsy maintsy "malemy" ny iray. Dia izany ve no atao hoe vhv "tia"? Ny fandeferana izany no atao hoe fitiavana ho an' ny vhv? Ary inona no atao hoe fitiavana ho an' ny lhl?
Mianatra, miasa ny vhv ankehitriny, miezaka ny hisondrotra sy hahavita tena ny vhv ankehitriny, izany hoe tsy hisy hampifilafila. Tsy midika hoe tsy misy fitiavana izy fa MBA te-banana ny maha-izy azy.
Raha tena tia ny lhl dia manaiky io toeran'ny vhv io. Tsy tokony hisy handefitra fa MIFANDEFITRA! Io sahala ny fifandraisana rehetra: raha misy iray voapepo loatra hatramin'izay, tsy maintsy misy ny fotoana midrinkina: ary ilay zatra manapepo dia milaza hoe mi-zesta na tady hanindry indray.
Efa hita any @ sehatra rehetra izao ny vhv; efa fitakiana any @ tany mandroso ny mira-lenta (vokatry ny fandrosoana sa condition-n'ny fandrosoana?)